Indha-cadde oo Kashifay in Al-Shabaab ay ka tirsan yihiin Madaxtooyada, Baarlamaanka iyo Hay’adaha kale! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Indha-cadde oo Kashifay in Al-Shabaab ay ka tirsan yihiin Madaxtooyada, Baarlamaanka iyo...
Jeneraal Yuusuf Maxamed Siyaad Indha-cadde /Sawir hore/
Muqdisho (Halqaran.com) – Wasiiru dowlihii hore ee Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya Jeneraal Yuusuf Maxamed Siyaad Indha-cadde ayaa sheegay Al-Shabaab inay ku jiraan meel kasta oo dowladda ka mid.
Indha-cadde ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ka tirsan yihiin hay‘addaha kala duwan ee dowladda sida Madaxtooyadda, Baarlamaanka iyo Hay‘addaha ammaanka.
Wuxuu kaloo sheegay la yaab inay ku noqotay Fanaan Al-Shabaab ah, maadaama Al-Shabaab ay sheegtaan Diin inay ku dagaalamaan, balse taasi ay ka been sheegeen.
“Waa korortay ku milanka Al-Shabaab ee hey’adaha dowladda, nimankaan diin ayay ku bilwdeen oo ay ka been sheegayeen, maantana waxay isu bedeleen niman Maafiyo ah sida maafiyadii Talyaaniga oo kale, maafiyada marka ay awood beeshay waxay isu bedeshay koox dadka dhaca, dadka baada albaab walba ku jira, haddii ay dowlad tahay iyo rayid.”ayuu yiri Yuusuf Indha-cadde.
“Al-Shabaab meel walba ayay ku jiraan, Madaxtooyada ayay ka mid yihiin, Baarlamaanka ayay ka mid yihiin Golaha Wasiirada, hey’adaha rayidka iyo ciidamada qalabka sida, meel aysan ka mid aheyn ma jirto.”ayuu yiri Indha-cadde.
Nabad Suggida Somaliya ayaa soo bandhigtay Fanaan ka tirsanaay Shabaab, kaasi oo sheegay inuu Shabaab ku biiray sanadkii 2013kii illaa haddana uu ka tirsanaay.
Fanaankaasi ayaa sheegay Al-Shabaab inuu u qaabilsanaay uruurinta xogaha iyo dhanka Maaliyadda.
Al-Shabaab ay ka tirsan yihiin Madaxtooyada